Posts Tagged: technology	World IPv6 Test Flight Day
On April 21, 2010	by Htoo Tay Zar	With	4 Comments	- iPhone, Knowledge	Red Dot Concept Design Award 2009 ရသွားတဲ့ပုံတွေကို တွေ့ဖူးမလားမသိဘူး။ အခု အပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေရယ် အောက်က ပုံတချို့တွေပါ။ နိုင်ငံတကာက Tech Magazine, blogs တွေမှာ တော်တော်များများမှာ တင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Smashing Magazine မှာ လဲတွေ့ခဲ့ဖူးလို့ ရှာကြည့်တာ 2008 ကတင်ခဲ့တာ ပြန်ရှာတွေ့တယ်။ ကျွန်တော့် အထင်မမှားရင် အဲဒီ future က ဒီနေ့ကနေ နောက် ၁၀ နှစ်လောက်က အလွန်ဆုံးပဲ ကွာလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အခုတော့ algorithm အရမ်းကောင်းတဲ့ search တွေ အကြောင်း အခန်းဆက် ပို့စ်ရေးလိုက်မလို့ပါပဲ။ ပထမဆုံးတော့ အဲဒီ Glass Interface Search အကြောင်းနဲ့ စလိုက်တော့မယ်။
Knowledge, technology	Continue Reading
On November 28, 2009	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Tech News	Do you know the history of Google? So, Check it out this Animation called “The Story Of Google“. This is not from Official Google’s Video, just created from one studio called Nick Scott Studio. But it’s perfect animation and complete Google’ History.
technology, Video	Over Clocking Seminar
On March 7, 2009	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Myanmar news, Tech News	ဒီနေ့ Info-Tech မှာ Asus ရဲ့ Authorized Dealer ဖြစ်တဲ့ Golden Power နှင့် Personal Computer Magazine တို့ က ပူးပေါင်းပြီး Over Clocking Seminar တစ်ခုကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ နေ့လည် ၁ နာရီမှာ လုပ်တာ ဖြစ်ပြီး Over Clocking အကြောင်းကို အကြောင်းအရာစုံ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ လက်တွေ့ကိုတော့ Asus Striker II Extreme နဲ့ Core i7, DDR3RAM တွေကို သုံးပြီး သရုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ နောက် ပရိတ်သတ်တွေက သိလိုတာတွေမေးပြီးနောက် OC ကို စိတ်ဝင်စားသူများကို စုစည်ပြီးတဲ့ နောက် ပွဲပြီးဆုံးပါတယ်။
Hardware, Myanmar news, technology	Continue Reading
Knowledge, technology, Video	20 Things About Google Chrome